Toora Intarneetii - Project dldl/ድልድል
Qajeelfamoota Toora Intarneetii
Piroojectiin dldl walitti dhufeenya dirrawwan hojii fi gareewwan qooda fudhattoota ta’an gidduu haala mijeessuun fi wal-jijjiirraa beekumsa aadawaa (kan biyya keessaa) Kaaba-Kibbaa jajjabeessuun kaayyoo isaa galmaan gaha. Keessumayyuu, yaad-rimeewwan fakkeenya ta’an fi hallan dirqisiisoo idil-addunyaa qopheessuun qu’annaa fi hojii irra oolmaa hiraarsa idil-addunyaa fi hiraarsa saalaa biyyooleessaa (kan mana keessaa) hojjechuun ol’aantummaa seenawaa hawaasa Kaabaa qolachuu barbaada.
Toorri Intarneetii kun kan hundeeffame kaayyolee kana galmaan gahuuf fi beekumsa haaraa qabiyyee piroojecticha waliin wal-fudhachiisuuf haala mijeessuu dha. Dhiyeessiiwwan piroojekticha waliin walitti dhufeenya qaban pieces dabaltee haguuguuf dhiyeessitoonni (booji’amtoonni/submissions) ni danda’u. Sakatta’amaniiru:
Wal-simannaa ilaalchota amantaawaa, fayyaa xin-sammuu namaa, fi hiraarsa mana keessaa (biyya keessaa)
Mala dhiyeessii Lubummaan, barumsi Dubbii Waaqayyoo (theology), ilaalchi amantaawaa ykn ulaagaaleen amantaawaa hiraarsa mana keessaa (biyya keessaa) irratti akka birmatan gochuu (tokkoomsu) keessatti Giddu-galummaa, deeggarsa xiin-sammuu fi tooftaalee bu’aa qabeessummaa maddisiistota yaada haaraa ittiin madaalan
Dhimma koornayaan, fuudhaa fi heerumaa akkasumas hiraarsa mana keessaan, (biyya keessaan) wal-qabatee lubootaa fi hirmaattoota yaa’iif leenjii fi hubannaa cimsu qopheessuu, haala mijeessuu
Muuxannoowwanii fi duub-deebiiwwan waa’ee hiraarsa mana keessaa sabootni xixiqqoo (baay’ina miseensaatiin) fi godaantotni qaban michuuwwaan dhimma koornayaa fi amantaaf si’aa’inaan addeeffamaniiru.
Qopheessitoota hojiilee toora Intarneetii ogeeyyii qu’annaa fi qorannaa, ogeeyyii fayyaa fi seeraa, ogeeyyii xiin-sammuu, tajaajiltoota hawaasummaa lubootaa fi barattootaa, fi dammaqsitoota uummataa keessaa akka guutuu adduynaatti afaanii fi akaakuu abbaa fedhe irraa ni affeerra. Hojiileen dhiyaatanis qu’annoowwan hojii irra oolmaan isaanii kan ragga’e, barumsawwan fi bu’aalee qu’annaa sagantaawwan jaarmiyaa (organizational programmes) irraa argaman, muuxannoowwan ilaalcha saayinsawaa sabootaa iddoo isa ilaallatu; ykn eddattoowwan hawwachiisoo gad-fageenyaan yaaduu hawaasicha keessatti uumuuf kaayyeeffate qooda fudhattoota adda addaa nuti waliin qabsiisuu barbaadnu irraa kan ta’anii dha.
Maddisiistota yaada walabummaa (bilisummaa) kan nuti deeggarru; poostaroota, walaloowwanii fi mudannoowwan gaggabaaboo dabalatee gumaachi barreeffamaa, kan sagalee fi suur-sagalees ni simanna. Gumaachi barreeffamaa qajelfamoota kanaa gaditti tarreeffaman kan giddu galeeffate ta’uu qaba. Eddattoowwan sagalees kan suur-sagalees qajeelfama galii godhamuu danda’uu eegu qaba. Kunis maxxansoota miira walabummaa qaban waliin kan wal-simatan ta’uu qabu.
Gumaachawwan kanaa olitti tarreeffaman galchuuf fedhii yoo qabaattan email piroojectichaa soasflf@soas.ac.uk dhaan wal-qunnamuun yaada wal-jijjiiruu fi wayitii yeroo isaa irratti walii galuun ni dandeessu.
Dheerinni barreeffamaa: baay’ina jechoota 800 fi 1200 gidduu ta’an ta’uu qabu. Kan kana irraa dheeratu galchuu barbaadnaan qindeeffama isaa irratti mari’achuuf garicha waliin wal-qunnamaa (contact).
Ulaagaaleen (daangaan) barreeffamootaa: barreeffamoonni galan marti Word File New Roman’n, hammi qubee (font size) 12 fi bakkeewwa banaa dachaa ta’uu qaba. Barreeffamootni wabiis bakka barbaachisuutti bifa hyperlink’n ta’uu qaba; kunis haala dhiyeessii kitaabolee wabii eegaan ta’a. Barreessitootni maddaawwan banaa dubbistootni keessattuu UK’n ala jiran hundaaf haala gahuu danda’uun akka fayyadamn ni jajjabeeffamu. Wabiin kitaabaas tooftaa APA kan eege ta’uu qaba (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#textual-works). Yaadolee kallattiin fudhataman (kanneen akka dhugaa bahiisaa) qoodduuwwa fugguu barreeffaman lamaan barreeffamuu qabu. Yaadonni kallaattiin waraabbaman jechoota afurtamaa ol yoo ta’an bitaa fi mirgaan cm 1 fagaachuun fi qoodduu malee barreeffamuu qabu.
Walii galtee qubeeffannaa Ingiliffaatti fayyadamuuf qajeelfamoota tooftaa dhiyeenyatti argaman fayyadamaa. Afaanota biroof garuu daangaan nuti keenyu hin jiru. Haa ta’u malee, barreessitootni filmaata sirna qubeeffannaa fi fooftaa barreeffamaa xiyyeeffannaa guddaa kan kennan ta’uu qabu.
Naamusa (ethics) istaandardiiwwan: qabiyyeewwan marti naamusa gaarii fi istaandardii amansiisaatiin kan gabbatanii kan bakka bu’an akkasumas qu’annaawwan hiraarsa mana keessaa fi hojiirra oolmaa idil-addunyaa kan giddu galeeffatan ta’anii dhiyaachuu qabu. Odeeffannoowwa kanaan dura toora Intarneetii irratti tajaajilan bu’uura eegumsa odeeffannoo ammeetiin mijeeffamaniiti faayidaa irra ooluu kan qaban. Istaandardoonni kun maal akka ta’e hubannoo yoo hin qabaatin gumaacha keessan dhiyeessuu yommuu qophooftanitti garee piroojectii waliin mari’achuu qabu.
Eeyyamaa fi Mirga Abbummaa: beekkamtiin/abbummaan barreessitootaaf kan kennamu yomuu ta’u, maqaa eeyyama uummata idil-addunyaa Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC 4.0) jalattis ni maxxanfama. Kun jechuun qopheessitootni barreeffama sanaa mirga abbummaa guutuu qabaatu. Garuu, jalqaba hojii isaanii toora Intarneetii piroojektichaa irratti maxxanfuuf walii galu. Jechuunis namni kamuu hojii sana haala fedheen fayyadamuu danda’a; garuu, dadalaaf hin eeyyamamu. Mirgi abbummaan kun qopheessaa hojii sanaa hojii isaa fedhii daldalaatiin alatti sirreessuu fi gabbisuu isa dandeessisa. Hojiin haaraan sun toora Intarneetii piroojectichaaf maxxansaa jalqabaa akka ta’u fi haala daldalaan ala ta’een akka fayyadamu beekkamtii kennuu qaba (must). Ta’us, hojiin wal-fakkaataa walii galtee walfakkaataa qabaachuu hin qaban.
Hojiiwwan sagalee fi suur-sagalee
Gosoota Gumaachaa: hojiiwwan bifa sagaleen dhiyaatan seeneessa gabaabaa, faaruu, afoola, ilaalcha dhuunfaa, sonaawwan qu’atamoo hawaasa tokkoo, deeb-gaaffii ykn waliin dubbii waraabbamee, k.k.f. dha. Hojiiwwan suur-sagalee garuu, suuraa qeenxees baay’ees, fakkiiwwa adda addaa, poostarootaa fi odeeffannoowwa bifa suuraatiin dhiyaatan ta’uu danda’u.
Dheerina: hojiiwwan sagalee daqiiqaa 20 ol ta’uu hin qaban (yoo dhimmi daqiiqaa dheeraa fudhachuun isaa dursa itti kenname malee). Gumaachaawwan suuraa garuu yoo baay’ate suuraawwan 10 qabaatu. Kunis maqaa (ibsa) suuraa fi barreeffamoota seensaa gabaabaa /gaggabaaboo/ qabiyyee suuraawwanii gabaabsanii kan ibsan ta’uu qaba. Hojiiwwan hunduu kaayyoo piroojectichi fi toorri Intarneetii hundeeffamaniif kan dhaabbatani deebii kennuu danda’an ta’uu qabu.
Foormaatii ittiin dhiyeessan: gumaachitootni hojii akkaawuntii bilisaa abbaa hojii sana ta’uu isaanii ittiin adda baafamu akka qopheessan gorfamu. Sagaleen waraabbaman divaayisii (meeshaa) dhuunfaa irratti qophaa’uu fi sanaan booda formaatii fudhatama qabuun sound cloud irratti ni maxxanfama. Si’a tokko maxxanfamnaan qopheessitootni hojii sanaa liinkii isaa koppii godhanii toora Intarneetii irratti maxxansuuf gara garee keenyaatti ergu. Gumaachawwan suuraa formaatii jpeg ykn jpg’n erguu qabu. Yookaan immoo odeeffannoowwan paakeejiiwwan MS Office’n (fkn. Word, Excel or another design tool) bifa mu’achuu danda’uun fi qulqullinni isaa bifa beekkamuu danda’uun erguu qabu.
Gumaachitootni wanta dhiyeessan sana irratti mirga ittiin fayyadamuu qabaachuu qabu. Maqaa eeyyama uummata idil-addunyaa Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC 4.0) jalattis ni maxxanfama. Kun jechuun qopheessitootni barreeffama sanaa mirga abbummaa guutuu qabaatu. Garuu, jalqaba hojii isaanii toora Intarneetii piroojektichaa irratti maxxanfuuf walii galu. Jechuunis namni kamuu hojii sana haala fedheen fayyadamuu danda’a; garuu, dadalaaf hin eeyyamamu. Mirgi abbummaan kun qopheessaa hojii sanaa hojii isaa fedhii daldalaatiin alatti sirreessuu fi gabbisuu isa dandeessisa. Hojiin haaraan sun toora Intarneetii piroojectichaaf maxxansaa jalqabaa akka ta’u fi haala daldalaan ala ta’een akka fayyadamu beekkamtii kennuu qaba (must). Ta’us, hojiin wal-fakkaataa walii galtee walfakkaataa qabaachuu hin qaban.
Project dldl/ድልድል completes week-long ‘refresher’ trainings on domestic violence with 155 clergy previously trained in Amhara region, Ethiopia 4 April 2022
Project dldl/ድልድል Launches New Podcast Series on Domestic Violence in Ethiopia 15 March 2022
Dr Romina Istratii’s study on conjugal violence in Tigray is now available open access 5 March 2022
Exploring African Conservative Clergy and Service Providers’ Experiences of Supporting African Christian Women Survivors of Intimate Partner Violence in England: A Clergy Perspective 15 February 2022
Project dldl/ድልድል becomes a member of the Faith and Violence against Women and Girls (Faith and VAWG) Coalition 10 December 2021
16 Days of Activism against Gender-Based Violence: Domestic Violence, Faith, and the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 5 December 2021
Project dldl/ድልድል completes one year of activities and receives congratulatory letter from Orthodoxy Cognate Page 1 November 2021
Project dldl/ድልድል has trained 156 Ethiopian Orthodox Täwahәdo clergy in Amhara region of Ethiopia 7 October 2021
Exploring ‘cultural sensitivity’ among frontline workers addressing violence against women in Lewiston, Maine 26 April 2021
The necessity for a decolonial approach to researching and addressing domestic violence in diverse religio-cultural contexts 26 April 2021